‘तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज भाग-१८’ - Enepalese.com
‘तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज भाग-१८’
इनेप्लिज २०७२ असोज १७ गते १६:०१ मा प्रकाशित
यस हप्ताको तपाईको सृजना हाम्रो आवाज-१८ भागमा हेर्नुहोस ::: भारतले नेपाल र नेपालीलाइ हेपिएको सम्बन्धित साहित्यिक भिडियो !!!! छुटाउनु होला नि फेरी !!!! सर्जकका भारत विरोधी सृजनाहरूले विश्वभरि नै भारतको साख नराम्रो सँग गिरीरहेछ । साहित्यिक कार्यक्रम ‘तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज भाग-१८’ भिडियो कार्यक्रम नेपाली इतिहासमै एक पृथक साप्ताहिक साहित्यिक पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम हो । ‘तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज’मा साहित्यिक/सांस्कृतिक/सांगितिक हप्ता भरीका समाचारहरूको साथमा विभिन्न सर्जकका सिर्जनाहरू वाचन गरिन्छ । यो कार्यक्रम प्रत्येक आइतबार अमेरिकाबाट प्रसारण गरिदै आएको छ।